ဒီစာက ကိုကိုအတွက်ညီရေးထားတာပါ။ ညီရဲ့ အတွေအကြုံ နဲ့ ညီဖတ်ဖူးတဲ့ စာတွေထဲက နေပေါင်းစပ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ထားတာပါ။ ကိုကို ကတော့ဇတ်လိုက်ပေါ့ နော် ဟီးးးးဟီးးးး.....
ရေးရမှာတော့ ရှက်စရာကြီး ကိုကို ကဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ညီက ရေးပြတာနော် ပြီးတော့မှ ညီကိုအထင်မသေးနဲ့ ညီဒီလိုအစားထဲမှာ မပါဘူနော် ကိုကို ကိုဘဲ တမ်းတနေတာနော် ညီရဲ့ ဘဝ ညီရဲ့ ခန္ဒာကိုယ် က ကိုကို အတွက်ဘဲ ဒါကို ကိုကို အရင်ဆုံးနားလည်ပေးနော်ရှင်းရှင်းဘဲပြောမယ် ကိုကိုရယ် ညီရဲ့ ဖူးငုံနေတဲ့ ညီရဲ့ ခရေ ဖူး ကို ကိုကို ဘဲခြွေခဲ့တာပါ ကိုကို ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ ညီခရေ ကို မခြွေ သေးပါဘူး နော် ကျေနပ်မြတ်နိုး စွာ တန်ဖိုး ထားလျှက်ပါ ကိုကို ပိုင်ရှင် ရှိပြီးသာမို့ ပိုင်ရှင်ကိုဘဲ တမ်းတမျှော်လင့်လျှက်ပါ။ ဘဝ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ချစ်သူ၊ ပထမဦးဆုံး ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူမို့ ၊ အမြဲတမ်းတ နေတာပါ ကိုကို......
ကိုကို ၇ယ် ညီနဲ့ကိုကိုခွဲနေ၇တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနော် ကိုကို မှတ်ထာလား ညီတော့ မှတ်ထာတယ် အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ဘဲ ကြာကြာ ညီကတော့ တစ်ရက်မှမေ့ မရသေးပါဘူးဗျာ.
ညီလေ ကိုကို ကိုအရမ်းတမ်းတတဲ့စိတ်နဲ့ ညီ ညတိုင်း ကိုယ်ဘာသာ ကိုအာဖြေပေမဲ့ အာသာမပြေဘူးကိုကို တစ်ခါတလေ မှန်ရှေ့ မှာ တကိုယ်လုံးချွတ်ပြီး ကိုယ့် ကို ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ကိုကို မက်မက်မောမော စို့ ခဲ့တဲ့ နို့ သီးခေါင်းလေးတွေကိုလည် ပွတ်သပ်ပြီး ချောမြူခဲ့ပါတယ်၊ ကိုကိုရက်မူးပြီး ညီကို အချစ်ကြမ်းကြမ်း ချစ်ခဲ့တုံးက ကိုကိုအားမလို အားမရ ဖြစ်ပြီး ညီရဲ့ ဘယ်ဖက် တင်ပါးကို သွေးစို့ တဲ့ အထိ ကိုက်ခဲ့တယ်လေအဲဒိ အနာရွတ်တောင် အခုချိန်ထိ ၇ှိနေတုံးဘဲ ကိုကို ပြီးတော့ ကိုကို ရဲ့ ၇ှည်လျှာ လုံးကျစ်တဲ့ လက်ချောင်း ကလေးတွေနဲ့ အမြဲတမ်း ချောမြူ ပွတ်သပ်ပေ ခဲ့တဲ့ ညီရဲ့ ပန်ရောင် ခရေ ပွင် ကို ပွတ်သပ်ပြီးအာသာဖြေတာဘဲ ကိုကို ဒါပေမဲ့ ညီလေ ပင်လယ်ရေ သောက်မိ သလိုဘဲ ဘယ်တော့မှ အာသာမပြေခဲ့ဘူး ကိုကို သိပါတယ် ညီဘယ်လောက်အထိ ဆိုးခဲ့သလဲဆိုတာ ကိုကိုက တော်တော့ ညီလေး သိပ်ကြာရင်မကောင်ဘူး ဆိုတာလေ ညီက လည်မရှက်ဘဲ တောင်းဆိုခဲ့တာဘဲလေ ညီက ကိုကိုဆီက ကျေနပ်နှစ်သက်မှူ တွေကို အပြည်အဝ ခံစာရတာဆိုတော့ ညီမရှက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။
ကိုကိုဒီလိုနဲညီလေ တစ်ရက် ရေချိုးခန်းကို သွားခဲ့တယ်သိလာ မနေနိုင်တော့ဘူ သူငယ်ချင်တစ်ယောက်က ဆက်သွယ်ပေးတာပါ သူငယ်ချင်က ဒီက တစ်ရုတ် တစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ပေးတယ်လေ အဲဒိဖုန်နံပါတ် ကိုဆက်ကြည်တော့ သူက အသက်မေးတယ် နောက် စကာတွေ အများကြီးပြောဖြစ်တယ် ခင်သွားတယ်လေသူနဲ့ နောက် သူနဲချိန်းပြီး ရေချိုးခန်သွားဖြစ်တာပေါ့ ဒါညီရဲ့ ပထမဦးဆုံး အတွေအကြုံနော်..
သူက အသက် ၃၃ ရှိပြီးတဲ့ လူပျိုကြီးပေါ့ ညီလိုချင်တဲ့ ဘောဒီပါဘဲ ကိုကိုလိုဘဲလေ မေးရိုးကားကာ ကိုယ်လုံးပြားပြား ရင်အုပ်ကားကား တင်ကားကား ရင်ဖတ်မှာ အမွှေတွေနဲပေါ့ လက်ရိုးလက်ဖျံ ကြီးတယ်လေ လက်မှာလည်အမွှေးတွေ မနည်မများရှိတယ် အသားဖြူတော့ ဆွဲဆောင်မှူ့ အပြည်ပေါ့ ညီတွေ့ လိုက်ကတည်းက ညီရဲ့ ဖွားဖတ်တော်က ခေါင်းထောင်လာတယ်လေ သူကလည်ပြောပါတယ် မင်ကငါထက်ငယ်တယ် ဆွဲဆောင်မှူ့ ရှိတယ်ပေါ့ ကိုပိုပြောနေကြ ဘဲလေ ဖင်လေးလုံးနေတာဘဲတို့ ပြုံးလိုက်ရင် ဖြုဖွေနေတဲ့ သွာလေးတွေကို သဘောကျတယ်ပေါ့ နောက်ညီတို့အအေးသွားသောက်ကြတယ်လေ အအေးသောက်ရင်နဲ့သူ့ အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် တွေ ဆွေနွေးကြတာပေါ့နော် သူအိမ်မှာလည်းဒီနေ့ လူမလစ်ဘူးတဲ့ ညနေပိုင်းမှ အိမ်ကအားမယ်ဆိုတော့ သူကဘဲ ရေချိုးခန်ရောက်ဖူးလာမေးတော့ မရောက်ဖူး ဘူးပေါ့ ဒါဆိုသွားကြမယ် ဆိုပြီး သွားဖြစ်တာပါ သူကားကို ကားပါတ်မှာထားပြီးတော့ ၇ထာစီးပြီး မြို့ထဲက ရေချိုးခန်တစ်ခုကိုသွားတယ် ဝင်ကြေးကိုသူပေးတယ်လေ ပြီတော့ သူကပြောတယ် ဒိနေ့ ငါမင်ကို စခင်တဲ့ အနေနဲ့ မင်ကိုအားလုံး စရိတ်ခံပြီး ပြုစုမယ်တဲ့ အမှတ်တရပေါ့ ဟုတ်ပါတယ် ကုန်ကျစရတ် အားလုံးကို သူဘဲထုတ်တယ်လေ ကျနော်ထုတ်တာကို သူကစိတ်ဆိုးသေးတယ် အပြန်မှာ club တစ်ခု ကိုဝင်တော့လည်း သူဘဲ အကုန်ထုတ်တာ ကျနော်တောင်အရမ်းအားနာသွားတယ် သူကို။
ကျနော်တို့ ဝင်ကြေးပေးပြီးဝင်တော့ ကောင်တာမှာထိုင်တာက ငွေသိမ်တာက မြန်မာလူမျိုးဗျ ညီအံသြ သွားတယ် တစ်ယောက်ကို RM-38 ပေးရတယ်လေ ကျနော်လည်ရင်ခုန်နေပြီး စကားမပြောနိုင်လောက်အောင်တုန်နေပြီး သူကကျနော့လက်ဆွဲပြီး အတွင်းခန်ကို ဝင်လိုက်တော့ ဧည်ခန်းထဲရောက်သွားတယ် အဲဒိမှာ ASTRO ကြည်နေတဲ့လူတွေ Computer ကြည်နေတဲ့သူတွေ ကိုတွေ၇တယ်လေ များသာဘဲ ကွန်ပြူတာကြည်နေတဲ့သူတွေ အာလုံ ကလည်း ကြည်နေကြတာ ယောကျာင်္ အချင်းချင်း လုပ်နေကြတဲ့ ဟာတွေလေ ညီကြက်သည်းထသွားတယ် ညီလည်သူငယ်ချင်ခေါ်တဲ့ အခန်နောက်တစ်ခုထဲရောက်တော့ လောကယ်အခန်ပါ အဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်ပြီး ကောင်တာကပေးလိုက်တဲ့ သောနံပါတ်နဲ ဖွင်ရတဲ့ အခန်းသေးသေးလေးထဲကို အဝတ်အစာတွေထည်ပြီး အဲဒိထဲက တဖက် ကိုခါမှာပါတ်ပြီး သွားရတာပါ အတွင်းခံ မဝတ်ရဘူတဲ့ ညီလည် ရှက်ရှက်နဲဘဲ တဖက်လေးပါတ်တော့ ညီဆုံချက်နေရာက ဖောင်းကြွနေပြီဗျ ဒါကိုဗျာ ဂျွန်စ် (သူငယ်ချင်)က သေချာခါးထောက်ပြီးကြည်နေတာဗျ နောက်ပြုံးပြီးတော့ အနာကပ်ပြီး ပါးကိုရွတ် ခနဲ နမ်းပြီး U'r sexuly boy! တဲ့ဗျာ ညီရှက်လိုက်တာ ပြီးတော့သူက မင်ငါကိုကြည့် ဆိုပြီးအဝတ်တွေချွတ်ပြတာ ညီအသက်ရှူဖို့ မေ့သွာတယ် အသာကဖြူဖွေးနေတော့ ရင်ဖတ်ကအမွှေတွေက အောက်ထိဆက်ပြီး ခြုံဖုတ်လေးလိုဖြစ်နေပြီးတော့ သူရဲ့ ငပဲကြီးက အောက်ကို မပျော့မမာဘဲ တွဲကျနေတာ တောင်ငူသီးမွှေး ကြီးကြီးလိုဘဲ ၇ လက်မ ကျော်ကျော် လောက်ရှိတယ် သူရဲ့ ဒစ်ကို အရေခွန်က တဝက်အုပ်နေတာများ ကိုကိုရာ ညီ ရေတအားငတ်လာ သလိုတံတွေတွေ ခဏခဏ ဘဲမျိုချ ရတယ် ပြီးတော့သူက လက်နဲပွတ်သပ်ပြလိုက်သေးတယ် ပြီးမှ တဖတ် ပါတ်တော့ သူဟာကြီးက တအားကြီးထိုးထွတ်နေတော့ အပေါ်ကို ထောင်ပြီး ပါတ်ရတယ်လေ ညီကိုလည် မျက်စိမှတ်ပြပြီး ပြောင်ပြတယ် ညီလည် တဖတ်ကို ပြန်ပြင်ဝတ် ၇တာပေါ့ ဟီးဟီး ရှက်စရာကြီးပေါ့ အပြင်ပြန်ထွက်တော့ လမ်းကြားလေထဲ ရောက်သွားသလိုဘဲ မိုင်းပြပြ မီရောင်အောက်မှာ ဂျွန်စ် က သူရဲ့မြင့်မားတဲ့ အရပ် ရှည်လျှာတဲ့သူလက်တံကြီးနဲ့ ညီလက်ကိုဆွဲပြီး လမ်းလျှေက်ရတာ တမျိုးအရသာဘဲကိုကို ကိုကိုနဲ့ ပြည်သူရင်ပြင်ထဲမှာ မှာ လူလစ်တဲ့ နေရာတွေ လိုက်ရှာ ရသလိုဘဲ နောက်အဲဒိ လမ်ကြာလေးမှာဘဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပြနေကြတယ် တချိုက ၂ယောက်ပူးပြီး မတ်တပ်၇ပ်နမ်းနေကြတယ် တချိုက တစ်ယောက်ပစ္စည် တစ်ယောက် ပွတ်သပ်နေကြတယ် မှောင်နေပင်မဲ့ သေချာကြည်ရင် မြင်ရတယ်လေ ညီတို့ နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက် သွားတာကိုလည် ဝိုင်းကြည်ကြတယ် ။
လက်လှမ်တဲ့လူ တွေ ပစ္စည်ကိုပွတ်ပြတဲ့လူတွေ နဲဗျ နောက်လမ်းဆုံးတော့ ညာဖက် ကိုချိုးဝင်လိုက် တော့ အပေါ်တက်တဲ့လှေကား နဲ အပေါ်ကိုတက်မှ အခန်တွေအများကြီးဘဲကိုကို ညီစိတ်ထဲ ဒီလူအကြိမ် တော်တော် ရောက်ဖူးပုံရတယ်လိုထင်တာပေါ့ အခန်တွေကလည်မအား ကြဘူထင်တယ် တံခါးတွေ ပိတ်ထားတာများတယ်။
နောက်ဆုံမရောက်ခင် လောက်မှာ တစ်ခန်က တံခါပွင်ရက်သာတွေလို့ ဝင်ကြည်တော့ အထဲမှာ ကုတင်ပုံစံမျိုး sofa အပြည်ခင်ထားတဲ့ ကုတင် တစ်လုံးတွေတယ် သူက အခန်ထဲကိုဦးဆောင် ပြီဝင်တော့ညီလည်နောက်နေ လိုက်ဝင်တာပေါ့ ပြီးတော့ သူက အခန်တံခါကို သေချာပိတ်လိုက်တယ်။
ဆိုဖာတွေက အေးစက်နေတာဘဲ ညီနည်နည်တော့ ကြောက်လာတယ် သူကညီအနောက်ကနေ သိုင်ဖက်ပြီတော့ ဒီမှာ စိတ်ချ ရကြောင်း ဘာမှမစိုးရိမ်ဖို့ပြောပြပါတယ် နောက်ညီနို့ သီးခေါင်း လေးတွေ ကိုပွတ်သပ်ပြီး နားရွက်ကိုနမ်းတယ် ညီသူ့ ရဲ့နွေးထွေတဲ့ အယုအယ မှာ ကျေနပ်သွာပါပြီး ကြောက်စိတ်တွေ ပျောက်သွာသလိုပါဘဲ
ပြီးတော့သူက ကုတင်ပေါ်ကို လှည့်အိပ် ခိုင်းတယ် ဖက်ထားရင်နဲ့ဒီလောက်အေးစက်နေတဲ့ ဆိုဖာအပေါ်ကို ညီမလှည်းရဲဘူ နောက် ကိုယ်အရှေ့ က ဘယ်နှစ်ယောက် လောက် အိပ်သွာမှန်မသိဘူလေ ဒါကိုသူကသဘောပေါက်တော့ သူရဲ့ ခါပါတ်တဲ ပုဝါ ကိုချွတ်ပြီးခင်းလိုက်တယ် အို့ သူ ကိုယ်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူး ကမ္ဘာ ဦးလူသာအတိုင်ပေါ့ ထိုးထောင်နေတဲ့ အရာတွေကလည်း ကြည်သည်းထစရာကြီး ကျနော့ အကြည်တွေကိုသူဆီကနေ မလွဲနိုင်ခဲ့ဘူး သူဘဲညီလက်ကိုဆွဲပြီး ကုတင်ပေါ်ထိုင်ချ လိုက်ပါတယ် နောက်အနမ်းမိုးတွေ အဆက်မပြတ်ပေါ့
သူရဲ့ညှင်သာတဲ့ အနမ်းတွေ ချောမွေ့ တဲ့ ပွတ်သပ် မှု့နွေးထွေးယုယစွာစုတ်ပေးတဲ့
နို့့သီးခေါင်းလေးတွေဟာ သူရဲ့ နွေထွေးတဲ့ နှတ်ခမ်း နှစ်လွှာ ကို ကျေနပ်စွာလက်ခံနေပါပြီး သူတဖြေးတဖြေးနဲ့ အောက်ကိုလျှောဆင်သွားပြီး ညီရဲ့ ဆီးခုံ ကအမွေးလေးတွေကိုတယုတယ ပွတ်သပ်ပြီးနမ်းနေတာ ညီ ရင်ထဲအသဲထဲယားကြည့်ကြည်ဖြစ်လာသလို လက်နှစ်ဖက်ကလည်ညီရဲ့ ဘယ်ညာ နို့ သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်သပ်နေတာ ညီအရည်ထွက်ချင်လာတယ် နောက်သူ့ မျက်နှာကို ညီရဲ့ ထိုးထောင်နေတဲ့ ညီဖွား ပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ပေးတာ ညီပတ်ထားတဲ့ သဖက် ကိုချွတ်ပြီးသာဖြစ်သွားတယ် သူ ညီရဲ့ ၆ လက္မကျော်ရှိတဲ့ ညီဖွားကို လက်နဲဆုတ်ပြီး ဂွင်တိုက်သလို လုပ်ပေးတယ် ပြီးတော့ ပြောတယ်မင်လည်းကြီးပါတယ်တဲ့။
ကျနော်ပြန်မဖြေဖြစ်ပါဘူး သူလက်ရဲ့ လီးအောက်ခြေကနေ ညုစ်ပြီး အပေါ်ကို ဆွဲတင် လိုက်တာ အထဲမှာ မထွက်ဘဲအောင်ထားတဲ့ အရည်ကြည်တွေဟာ ကျနော့ ရဲ့ ဒစ်ထိပ် ကနေ လျှောဆင်လာတာ အများကြီပါဘဲ နောက်အဲဒိအရည်တွေကိုသူ လျှာနဲ လျှက်လိုက်တာ တွေလိုက်တယ် ပြီတော့ သူလက်ဖဝါးနဲ့ ဒစ်တစ်ခုလုံးကို ပွတ်သပ်လိုက်တာ ကျနော်အကြောတွေ တွန့် သလို ဖြစ်သွားတယ် နောက်သူရဲ့ ရွဲစိုနေတဲ့လက်ဖဝါးတွေဟာ ကျနော့ ရဲ့ ဥတွေကို ယုယုယယ ပွတ်သပ်ပေးပြီး ကျနော့ရဲ့ ဆုံချက်ဖြစ်တဲ့ ခရေပွင့် ကို လက်အပြား လိုက်ပွတ်သပ် ပေးပါတော့တယ် ကျနော်ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကာလိုက်ပြီး ခါးကို ကော့ပေးလိုက်တော့ သူရဲ့ လက်ချောင်တွေဟာ ညီရဲ့ ခရေပွင့် ကိုစမ်းသပ်နေပါပြီး ညီလေ ငြီးသံနည်နည်ထွက်လာပါပြီး...
နောက်သူလက်တစ်ဖက်က ညီလက်တစ်ဖက်ကိုလာဆွဲပြီး သူလီးကြီးပေါ်တင်ပေးထာတော့ညီလည် ကျေနပ်စွာ ကိုင်ကြည်ပါတယ် တော်တော်ကြီးပြီး တော်တော်ကိုမာနေပါပြီး ကျနော့အားနဲ ညုစ်ကြည့်တာ သူဘာမှ မဖြစ်သလိုပါဘဲ နွေးနွေး မာမာကြီး ဖြစ်ပြီး ကိုင်ထားရတာကိုက ကျေနပ်စရာကြီးပါ သူလည်းတော်တော်လေးကို ကျေနပ်နေပုံဘဲလေ
သူ စပြီးကျနော့အပေါ်ကိုခွတက်လာပြီး သူရဲ့မာတောင်နေတဲ့ လီး ကြီနဲ့ ကျနော့ ဆီခုံတွေ ဥတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး ကျနော့ပါင်ကြားထဲကို အတင်ထိုးသွင်နေတာကတော့တော်တော်လေးကို အနေရခက်သလို ကျနော့ ပေါင်ကို အလိုလိုကားပေး မိရက်သားဖြစ်နေ ပြီး ခဂေ ဝတိုးဝင်လာနေပါပြီး ကျနော်အသက်ရှု သံကျယ်လာပါပြီး ၇င်ထဲလည်းတုန်လာပါပြီး သူရဲ့ ကြီးမာတဲ့ ဒစ် ထိပ်ကြီးစာ သံခမောက်ကြီးဟာ ကျနော့ခရေဝကို တိုးချဲပြီး အားမန်အပြည်နဲ့ လှုပ်ရှာနေပြီးအနမ်းမိုးတွေလည်း အဆက်မပြတ်ပါဘဲ ကျနော်လည်သူရဲ့ ကြီးမာတဲ့ လက်မောင် ကြွတ်သားတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး တိုးဝင်လာမဲ့ သူလီးချောင်ကြီးရဲ့ အသွားအလာကို ရင်ခုံစွာနဲ့ စောင့်ကြည်နေ ရတာပေါ့ သူ ဂျယ်လီဖူးကို ထုတ်ပြီး သူရဲ့ လီးမာမာကြီကို မံပြီး ကျနော့ခရေပွင်ကို သူလက်ချောင်လေးတွေနဲ့ ချော့မြူ နေချိန်ဟာကျနော်အတွက် ရေစီးမှာမျှောသွားသလိုပါဘဲ သူကျနော့ကို စိတ်မတင်းထာဖို့ပြောရင်း သူရဲ့ ဒစ်ကြီးဝင်လာပါပြီး ကျနော်လည် စ စချင်မို့အားလို့ နာကျဉ်စွာ အော်လိုက်ပြီး သူကို ဖက်တွယ်ထားလိုက်ရပါတယ် သူ ပြန်လျှော့ပေးပြီး ပြန်သွင်း လိုက်တာများ ကျနော် မျက်လုံးထဲ မီတွေပွင့် သွာသလိုပါဘဲ တိုးဝင်လာတဲ့အရှိန် ကို တော်တော်လေးခံစာလိုက်၇တယ် သူ့ လီတဝက်လောက်ရောက်ချိန်မှာ ကျနော် ဗိုက်နာချင်သလို ဖြစ်လာပြီး နာလာတယ်တအား မျက်စိကိုမှိက်ပြီး ကြိပ်မှိတ်ခံစား၇တာ သူလီးကြီး တဆုံး ဝင်လာတဲ့ အထိပါဘဲ ကျနော့ထဲမှ ပြည့်ကျပ်နေတာဘဲ တိုးဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဖင်ဝ တစ်ခုလုံ အထဲကိုဝင်သွာသလိုပါဘဲ ပြန်ဆွဲထုတ်ချိန်မှာလည်း အုံလိုက်ကြီး ကြွတက်လာသလိုခံစာရတယ် သူ အဝင်အထွက် အပေါ်မျ ကျနော် ကျေနပ်လာပါပြီး တိမ်လွာပေါ်ရောက်နေသလိုပါဘဲ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ပေါ့
Posted by အချစ်ရွာ at 04:32 No comments:
ကိုကို....... ဒီစာက ကိုကိုအတွက်ညီရေးထားတာပါ။ ညီရဲ...